TIANSE DUNIDA wakiilka TABABARAYAAL
Sida mid ka mid ah soo saarayaasha xirfadeed ee dunida ee isticmaalo daabacaadda iyo alaabta xafiiska , inaannu wax ka qaadannaa iyo kibirka weyn ee bixiya ugu dambeeyey, alaabta xafiiska ku habboon iyo adeegyada. Baahida Office yihiin ballaaran oo naga go'an in aan la kulmo oo dhan oo iyaga ka mid. Sidaa awgeed, waxa aanu had iyo jeer raadinayaa iskaashi ganacsi la wakiilada dunida oo dhan. Waxaan si daacad ah kugu casuumeynaa in aad noqon mid ka mid ah xubnaha ka tirsan ee TIANSE Qoyska. Ha na soo wada shaqeeyaan si ay adeeg fiican macaamiisha iyo in ay gaaraan guul weyn!
Experience Industry Rich
Iyada oo waayo-aragnimo ka badan 10 sano in industry ee, waxaan diirada ku saabsan waxa aannu ku samayn lahayn oo yeelatay kala duwan ubalaadhan ee daabacaadda isticmaalo iyo qalabka xafiiska ee taxanahan iyo Hababka kala duwan.
Heegan u ah Quality
Iyada oo nidaamka QC adag iyo baaritaanka adag ee-guriga, waxaan ka dhigi go'an oo shir ku si loo hubiyo in macaamiisha our kaliya helaan wax soo saarka ugu tayada sareeya iyadoo qiimaha ugu hooseeya ee suuragalka ah.
Bixinta Fast iyo wakhti
Iyadoo saldhig wax soo saarka ah oo daboolaya 35,000 oo mitir oo laba jibbaaran in Huizhou iyo 5 bakhaarada waaweyn la total bakhaar kor u bannaan in 10,000 oo mitir oo laba jibbaaran ee Shiinaha, gaarsiinta balan qaadi karo 48 saacadood ee magaalooyinka waaweyn ee dalka Shiinaha gudahood.
All-agagaarka Adeegga Macaamiisha
Iyadoo koox adeegga macaamiisha xirfadeed, xirfad 193 xarumaha adeegga macaamiisha iyo 2,300 oo warbaahinta iskaashi heer qaran ah, waxaan ku siin dhan-ku wareegsan iyo kartoo adeegyada macaamiisha oo dhammuba aannu waqtiga oo dhan.
Isku halleeyey TIANSE Value Brand
waxyaabaha brand TIANSE waxaa nimcaysan by labada macaamiisha gudaha iyo dibada, oo waxaa lagu gadaa aad u wanaagsan in dhufto ee e-commerce oo waaweyn sida Tmall.com, JD.com iyo Amazon, iwm Currently, TIANSE leedahay in ka badan 80 wakiilada brand dunida oo dhan.
Taageerada Development Product New
Mudnaanta Support Sample Free
Gifts Brand xayaysiis Support
Taageerada Internet Marketing Promotion
Taageerada Resource Customer Regional
Full taageero noocyo Brand
Wakiilka Professional Support Beecmushtar
Professional Technical & dib iibka Support
aqoonsi buuxda ee TIANSE dhaqanka shirkadaha, falsafada ganacsi iyo istiraatijiyad horumarineed; rabitaan xoog leh in ay la shaqeeyaan TIANSE in ay ganacsi sameeyaan guul.
Shirkadda A diiwaan goobta degaanka oo leh awooda ganacsi gaar ah iyo aqoonsiga.
khayraadka macaamiisha yara deggan iyo horumar waara ee ganacsiga.
awoodda hawlgalka marketing Strong goobta degaanka oo leh sumcad ganacsi wanaagsan.
Ku biir TIANSE Now!
Waxaan si daacad ah kugu casuumeynaa in aad noqon mid ka mid ah xubnaha ka tirsan ee TIANSE Qoyska. TIANSE waxey idiin tahay saaxib fiican. Ina keena aynu dagaalamaan wada guusha ganacsi weyn oo natiijooyin guul-guul badan dhala.